I-White Shell Cottage - i-Falmouth
I-ikhaya eliyindawo yokuhlala ephelele ibungazwe ngu-Gail
U-Gail unokuphawula okungu-356 kwezinye izindawo.
Itholakala onqenqemeni lwamanzi e-Falmouth, i-White Shell Cottage iyinketho efanelekile yendawo yakho elandelayo yokubalekela ngasogwini ogwini olusempumalanga lweTassie.
Ngohlelo oluvulekile lokudlela nezindawo zokuphumula ezinendawo yomlilo efudumele, uphahla oluphezulu, izici zamapulangwe kanye nombhede omkhulu othokomele uzoba nakho konke okudingayo ukuze uphumule.
Le ndawo yokugezela engu-3 yokugezela engu-1 inekhishi lesimanje elinako konke onakho ekhaya okuhlanganisa umshini wokuwasha izitsha, i-microwave, ifriji, isitofu kanye nazo zonke izinto ezidingekayo ukuze upheke ukudla okumnandi kwabangane nomndeni. I-White Shell iyisipiliyoni esiphelele sohlangothi lolwandle, enechweba elivikelekile elivikelekile kanye nerempu yesikebhe eduze nomnyango. Kunezindawo ezimbili zangaphandle, umpheme kanye novulandi ngaphambili kwekotishi kuyindawo ekahle yokuphumula lapho ubuka amagagasi asanda kungena. I-Falmouth iyidolobhana elingasogwini lolwandle, ngakho-ke indawo engcono kakhulu yokugcina ukudla. Izimpahla ziyi-Scamander okuyimizuzu engama-20 ukuya enyakatho, noma ukukhetha okwengeziwe kanye nezindawo zokudlela zasendaweni, idolobha elikhulu iSt Helens elingamaminithi angama-30 enyakatho, liyindlela enhle.
I-White Shell Cottage iyindawo yokuphumula obuyifuna eholidini lakho elilandelayo noma ngempelasonto yokubalekela.
Inombolo yepholisi: DA 052-18